Sellics Benchmarker: Ahoana ny fomba hanoratana ny kaontinao dokam-barotra Amazon | Martech Zone
Matetika izahay no manontany tena, amin'ny maha-mpivarotra, ny fandehan'ny doka ataonay raha ampitahaina amin'ireo mpanao dokambarotra hafa ao amin'ny indostrianay na manerana ny fantsona manokana. Ny rafitra Benchmark dia natao noho izany antony izany - ary Sellics dia manana tatitra benchmark maimaim-poana sy feno ho anao Amazon Advertising Account hampitaha ny zava-bitanao amin'ny hafa.
Ny dokambarotra Amazon dia manolotra fomba hanatsarana ny mpivarotra ny fahitan'ny mpanjifa ny fahitana, fizahana ary fivarotana vokatra sy marika. Ny doka niomerika nataon'i Amazon dia mety ho fitambarana lahatsoratra, sary na horonan-tsary ary miseho hatraiza hatraiza avy amin'ny tranokala ka hatrany amin'ny media sosialy sy atiny streaming.
Dokam-barotra Amazon manolotra safidy betsaka amin'ny fanaovana doka, ao anatin'izany:
Marika mpanohana - doka isan-tsindry (CPC) izay manasongadina ny marika famantarana anao, lohateny manokana ary vokatra marobe. Ireo doka ireo dia miseho amin'ny valin'ny fiantsenana mifandraika ary manampy amin'ny fitarihana ny fahitana ny marikao eo amin'ireo mpanjifa miantsena vokatra toa anao.
Vokatra voafehy - doka isaky ny Click (CPC) izay mampiroborobo ny lisitry ny vokatra tsirairay ao Amazon. Ny vokatra tohana dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahitana ny vokatra tsirairay miaraka amin'ny doka hita amin'ny valin'ny fikarohana sy amin'ny pejin'ny vokatra
Fampisehoana an-tsehatra - vahaolana amin'ny dokam-barotra fampisehoana serivisy manokana izay manampy anao hampivelatra ny orinasanao sy ny marikao amin'ny Amazon amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo mpiantsena amin'ny dian'ny fividianana, Amazon sy ivelan'ny Amazon.
Benchmark Amazon Ad
Mba hihoatra ny fifaninanana dia mila mahatakatra izany ianao. Ary izany no mahatonga ny fitaovana Sellics Benchmarker ho tsara kokoa noho ny zavatra hafa rehetra eny an-tsena: izany ampidiro ao anatin'ny contexte ny zava-bitanao ary omeo hevitra azo atao ianao mba hahatonga anao ho mpanao dokambarotra mahasoa kokoa amin'ny Amazon. ny Sellics Benchmarker mamakafaka ny zava-bitanao amin'ny Product Sponsored, Sponsored Brands, ary Sponsored Display ary mampiseho anao tsara ny toerana anaovanao zavatra tsara sy ny toerana ahafahanao mivoatra.
Ireo mari-pamantarana marimaritra iraisana izay ampitahaina dia:
Fomba fampisehoana doka: Mampiasa ny endrika mety rehetra atolotry ny Amazon ve ianao? Ny tsirairay dia samy manana ny paikadiny sy ny fotoana mety ananany. Fakafakao ny vokatra narotsaka, ny marika tohanan'ny mpanohana ary ny fisehoana misy mpanohana
Isa feno: Fantaro raha anisan'ny 20% ambony ianao - na ny any ambany
Ampitahao ny vidin'ny varotra amin'ny varotra (ACOS): Firy isan-jaton'ny varotra mivantana nataonao tamin'ny fampielezana doka notohanana raha ampitahaina amin'ny mpanao dokam-barotra mediana? Conservative loatra ve ianao? Fantaro ny dinamika ahazoana tombony amin'ny sokajy misy anao
Mariho ny vidinao isaky ny kitihina (CPC) Ohatrinona no andoavan'ny hafa ny kitapo mitovy amin'izany? Ianaro ny fomba hahitana ny tolotra tonga lafatra
Ampitomboy ny tahan'ny Click-Through (FNT): Mihoatra ny tsena ve ny endrika doka anao? Raha tsy izany dia ianaro ny fomba hampitomboana ny fahafaha-mahazo tsindry
Hatsarao ny tahan'ny fiovam-po Amazon (CVR): Vetivety dia mahavita hetsika manokana ny mpanjifa aorian'ny fikitihana ny doka iray. Novidina kokoa noho ny hafa ve ny vokatrao? Ianaro ny fomba hikapohana ny tsena sy handresy lahatra ny mpanjifa
Miorina amin'ny angon-drakitra maneho $2.5B amin'ny fidiram-bolan'ny doka manerana ny vokatra 170,000 sy sokajy vokatra 20,000, ny Sellics Benchmarker no fitaovana fampisehoana doka mahery vaika indrindra eny an-tsena. Ary maimaim-poana izany. Ny tsena tsirairay, ny indostria, ny kluster endrika dia ahitana marika tokana 20 farafahakeliny. eo ho eo ny tarehimarika mediana ara-teknika kaonty ho an'ny any ivelany.
Amariho ny kaonty dokambarotra Amazonanao
Manomboka amin'ny tatitra momba ny Benchmarker Sellics
Rehefa nametraka ny fangatahanao ianao Ny tranokalan'ny Sellics, dia hahazo ny tatitra maimaim-poana ianao ao anatin'ny 24 ora. Rehefa manokatra ny tatitra ianao dia hahita marika fampisehoana eo amin'ny zoro havanana ambony izay manome anao ny isa ankapobeny. Avy hatrany dia mahazo topimaso tsara momba ny ataonao sy ny zavatra ataonao ianao mety hitombo izany.
Ny mari-pamantarana samihafa dia maneho ny fijoroan'ny kaontinao amin'ny fomba manaraka:
Platinum: Top 10% amin'ny mitovy taona aminy
Volamena: 20% ambony indrindra amin'ny mitovy taona aminy
Volafotsy: 50% ambony indrindra amin'ny mitovy taona aminy
Afovoany: 50% ambany amin'ny mitovy aminy.
PRO TIP: Ampiasao ny bokotra antso ho an'ny resadresaka maimaim-poana miaraka amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana momba ny dokam-barotra Amazon Sellics. Afaka manampy anao handika ny teninao izy ireo Sellics Benchmarker mitatitra na milaza aminao bebe kokoa momba ny fomba fampiasanao ny Sellics mba hanatsarana ny fampielezan-kevitrao.
Eo ambaniny fotsiny no ahitanao ny fizarana famintinana, izay mampiseho ny zava-bitanao amin'ny ankapobeny sy ireo tondro Fampisehoana fototra tsara indrindra sy ratsy indrindra (KPI) raha jerena indray mandeha. Azonao atao ny mampiasa ny bokotra eo an-tampony havanana mba hisafidianana raha tianao ny hampitaha ny zava-bitanao amin'ireo mari-pamantarana mifandraika na amin'ny zava-bitanao tamin'ny volana teo aloha.
Fantaro ny fiovana ao amin'ny Amazon Advertising KPIs
Ny KPI avo lenta toa ny ACoS dia voataonan'ny lafin-javatra maro samihafa, mety ho sarotra ny mahafantatra izay mahatonga ny fiovana eo amin'ny fampisehoana.
Tena tsara ny funnel fampisehoana satria
Afaka mahita ny metrikao rehetra amin'ny toerana iray ianao.
Ny funnel dia mampiseho ny anton-javatra metrika tsirairay ao amin'ny KPI-nao, mamela anao hamantatra mora foana ny antony mahatonga ny fiovana.
Ao amin'ny ohatra demo tatitra etsy ambony dia hitanao fa niakatra ny ACoS satria nitombo mihoatra noho ny varotra doka ny fandaniana doka. Ankoatra izany, hitako fa ny fihenan'ny tahan'ny fiovam-po sy ny sandan'ny baiko antonony (AOV) nihazona ny fivarotana doka.
Ataovy azo antoka fa tsindrio ny Fiovana isam-bolana bokotra eo ambanin'ny funnel mba hanaraha-maso ny zava-bitanao rehefa mandeha ny fotoana.
Fantaro ny vokatra Amazon manana fiantraikany lehibe indrindra (tsara na ratsy)
Miaraka amin'ny Famakafakana Impact Driver, afaka mahita haingana ianao hoe iza amin'ireo vokatra no mandray anjara betsaka indrindra—samy tsara (maitso) na miiba (mena)—amin'ny fiovan'ny zava-bitanao isam-bolana ho an'ny KPI lehibe rehetra, ao anatin'izany ny fandaniana doka sy ny ACoS.
Hamaly ny Impact Driver Analysis fanontaniana lehibe, toa:
Nahoana no nitombo/nihena ny varotra dokako?
Iza amin'ireo vokatra no nahatonga ny fihenan'ny / fitomboan'ny ACoS, fivarotana doka?
Taiza no nitombo ny CPC-ko tamin'ny volana lasa?
Amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo tabilao telo an'ity fitaovana ity (riandrano, sarintanin'ny hazo, na latabatra vokatra), dia azonao atao ny mamantatra haingana sy tsy misy olana ireo mpilalao matanjaka indrindra sy ny fahafahanao manatsara indrindra.
Ity dia fitaovana tena ilaina ho an'ny mpanao dokambarotra rehetra!
Mahazoa Dive lalina ho an'ireo ASIN 100 ambony indrindra anananao
Ny fizarana Famakafakana vokatra no ampahany tiako indrindra amin'ny fitaovana satria manome anao angon-drakitra momba ny fahombiazan'ny ASIN. Sahala amin'ny funnel fampisehoana, ny endrika dia ahafahanao manao famakafakana mahery vaika, ary ny tena zava-dehibe dia mora azo.
Voalohany, tiako ny mampiasa ny sivana bokotra hanivana ny fandaniana doka faran'izay kely indrindra. Amin'izany fomba izany, fantatro fa manatsara ny vokatra misy fiantraikany lehibe amin'ny fampisehoana ankapobeny aho.
Avy eo miaraka amin'ireo vokatra ambiny, mijery ireo faribolana miloko eo akaikin'ny KPI aho mba hahitana raha ambony na ambany ny mari-pamantarana zana-tsokajy. Ny rafitra fandokoana loko dia miasa toy izao manaraka izao:
Maitso: ao anatin'ny 40% ambony ianao = asa tsara
Mavo: eo afovoany ianao 20% = mila mihatsara ianao
Mena: eo amin'ny 40% ambany ianao = manana fahafahana lehibe hitombo ianao.
Satria ny ACoS dia voafaritra amin'ny ankapobeny amin'ny tahan'ny click-through (CTR), ny tahan'ny fiovam-po (CVR), ary ny vidin'ny klioba (CPC), matetika aho no mitady teboka mena ary avy eo mavo eo akaikin'ny CTR, CVR, na CPC-ko, ary avy eo manomboka. fanatsarana ireo manana Ny rindrambaiko Sellics.
Na dia tsy mila ny rindrambaiko Sellics aza ianao alao maimaim-poana ny tatitra Sellics Benchmarker, tena manoro azy aho! Manana endri-javatra automatique sy AI izy ireo izay mampiasa ny herin'ny angon-drakitra lehibe hanaovana ny asa mavesatra rehetra ho anao.
Paikady fanentanana avo lenta
Ny Internet dia feno torohevitra momba ny fomba hanatsarana ny KPI-nao, saingy vitsy dia vitsy ny olona hiditra amin'ny fomba tokony handrafetanao ny fampielezan-kevitrao. Raha tsy hoe mandoa vola be amin'izy ireo ianao, izany hoe.
Ity dia faritra iray hafa izay ny Sellics Benchmarker manome sanda tsy mampino. Ny fizarana Firafitry ny Kaonty dia manome anao ny fomba fijery ankapobeny momba ny fametrahana ny kaontinao sy mampitaha izany amin'ny kaonty hafa mahomby.
Ny fitaovana dia manao kajy telo samy hafa: vondrona doka/fanentanana, ASINs/fanentanana, ary teny fototra/fanentanana. Avy eo dia manome anao "naoty" mora vakiana ho an'ny tsirairay. Ny rafitra fanasokajiana dia miasa toy izao manaraka izao:
mavo: eritrereto ny hanao fanovana sasany
mena: mety mila amboarina ny fampielezan-kevitrao ianao.
Raha tsy hoe mpanao dokambarotra manana doka mihoatra ny $10,000 isam-bolana ianao, ireto ny sasany amin'ireo torolalana ankapobeny atolotry ny fitaovana.
Vondrona doka/fanentana: Ny fananana vondrona doka vitsivitsy isaky ny fampielezan-kevitra dia hanome anao fifehezana bebe kokoa amin'ny teti-bolanao.
ASIN/Vondrona doka: Ho an'ny ankamaroan'ny mpanao dokam-barotra, hatramin'ny ASIN 5 doka isaky ny vondrona doka no mety indrindra.
Teny fototra/vondrona doka: Ho an'ny ankamaroan'ny mpanao dokambarotra, teny fanalahidy 5 ka hatramin'ny 20 isaky ny vondrona doka no hiasa tsara indrindra.
Ny endrika doka Amazon Deep-Dive
Ho an'ireo mpanao dokam-barotra izay mitondra vokatra voatokana sy fampisehoana voatokana, ny endrika doka lalina dia mety ho iray amin'ireo ampahany tsara indrindra amin'ny ny tatitry ny Sellics Benchmarker.
Ny sary dia mampiseho ny fitsinjarana ny fandaniana doka nataoko raha oharina amin'ny mari-pamantarana sokajy, mba ho hitako mora raha toa ka tokony hieritreritra ny hampiasa vola bebe kokoa na latsaka amin'ny karazana doka iray aho.
Raha mikoriana midina ianao dia afaka mahazo naoty KPI sy mari-pamantarana amin'ny endrika doka. Raha tsindrio ny bokotra “+” eo akaikin'ny iray amin'ireo KPI ianao dia afaka manao famakafakana ambaratonga ASIN ho an'ny ASIN izay ataonao doka miaraka amin'ny vokatra Sponsored.
Iray amin'ireo lafiny lehibe indrindra amin'ny Sellics Benchmarker ny hoe rehefa avy misoratra anarana amin'ny tatitra voalohany ianao dia hahazo tatitra isaky ny 30 andro izay misy angona tamin'ny volana teo aloha. Amin'izany fomba izany dia afaka manohy manatsara sy manatsara ny kaontinao ianao mba hahatratrarana ny tanjonao amin'ny dokam-barotra Amazon.
Ny sanda natolotr'ity fitaovana ity dia lehibe. Raiso maimaim-poana ny tatitra Sellics Benchmarker anio mba hitondra ny dokam-barotra ho amin'ny ambaratonga manaraka sy handresy ny fifaninanana.
Fialana andraikitra: mpiara-miasa amiko aho Sellics.
Tags: dokambarotra amazonaMarika mpanohana an'i AmazonAmazon Products Productsmpivarotra